राजनीतिक प्रेम मुवारक – Sajha Bisaunee
राजनीतिक प्रेम मुवारक
। २२ मंसिर २०७५, शनिबार १६:३८ मा प्रकाशित
पहिले पहिले हुने तिम्रा असामयिक भेटहरू, तिम्रा असामयिक कुराहरू, तिम्रा असामयिक हेराइहरू साँचै अचेल त सब समसामायिक भएका छन् । तिम्रो मुखबाट सुनिने प्रेमका शब्दहरू सब पार्टीगत भाषण जस्ता भएका छन् । तिम्रो अनुहार हेर्दा यस्तो लाग्छ कि तिमी त त्यो दुई तिहाइ मत नपुगेर संशोधन हुन नसकेको संविधानको धारा हौ ।
कस्सम, तिमीलाई त्यही असंशोधित धारा सम्झिएर मेरो संविधानबाट चट्ट हटाइदिन मन छ । तर छाप यति झट्टै कहाँ मेटिएर जान्छ ! समय लाग्छ । तिमीलाई राम्रो सँग थाहा छ, लोकसेवाको प्रश्नमा जवाफका विकल्पहरू हुन्छन् । तिमी त्यही तुक्ष्ण ‘अप्रेशन’ हौ, जसले बहुत असर पार्छ ।
भन्न त सजिलै भन्थ्यौं ‘तिम्रो प्रगतिको एक हिस्सा बनुँ, तिम्रो खुशीहरूमा खुशीहुनेहरू मध्येमा एक बनुँ ।’ ती सबै शब्द एक बार फेरि पढ्छु अनि एक मज्जाको हाँसो उठ्छ ।
खै तिमी त ठ्याक्कै नेता जस्तै बन्यौं ? एकपटक तिम्रो निर्वाचन भएछ भने पनि मेरै एक भोटले तिमीलाई हराउन मन छ । मेरो नाम तिम्रो दिमागमा यसरी फिट गर्नुछ ताकी हरेक पटक तिमी आफ्नै मनसँग पराजय बन्न सक ।
तिमी र म बीचमा ठ्याक्कै सर्वनाम फरक छ । अरु त झन कहाँ हो कहाँ । तिमी प¥यौ रणनीतिज्ञ त्यसैमाथि हिसाब किताबको वासलात सधैं मिलाउने मान्छे तब त मलाई तेसै कहाँ छोड्थ्यौं र ?
हो, मलाई तिम्रो भाषा ठ्याकै लोकसेवाको वैकल्पिक प्रश्न बाहेक अरु केही लाग्दैन । तिम्रो हेराइ लाचार व्यक्तिको जस्तो बाहेक अरु केही लाग्दैन ?
तिम्रा शब्द, तिम्रो बोलाई अदालतमा उभिएर अपराधिले गीतामा हात राख्दै बोलेको त्यो झुट बाहेक अरु केही लाग्दैन । तिम्रा हरेक हाउभाउ, त्यो घवराहट देख्दा मेरा सामू तिम्रो आत्मसमर्पण गैरकानुनीय बोहक अरु केही लाग्दैन । तिमीले प्रशंसा गरेका शब्द काला धब्बावाला शब्द बाहेक अरु केही लाग्दैन । हो, मलाइ तिमी गल्ती बाहेक केही लाग्दैन ।
किन ग¥यौं यो सब भनि तिमीलाई सोध्न हजार प्रश्न छन्, हजार सवाल छन् तर थाहा छ, तिमीसँग एक जवाफ छैन । जसले मेरो प्रश्नलाई न्याय गर्न सकोस् ।
तिमी आफै भन,
म तिम्रो निम्तोलाई कसरी सदर गरु जबकी त्यहाँ मेरो आवत–जावतको कुनै कदर छैन ? म कसरी सम्झु कि तिम्रो नियतमा रणनीति छैन ।
मलाई माफ गर ! म तिम्रो वासलातको डेविट–क्रेडिटमा अटाउँदिन ?
म तिम्रो कुनै पनि समयको अध्याय बन्ने सक्दिन ?
म तिमीलाई कहिल्यै माफ गर्न सक्दिन ? म तिम्रो झुटो खेलको पात्र बन्न सक्दिन ? अहँ, तिम्रो अपराधको म सिकार बन्न सक्दिन ।
मेरो नजरबाट गिरीसकेको मान्छे तिमी, तिमीलाई बोलाउनलाई म सँग कुनै सम्बोधन छैन, कुनै शब्द छैन ।
एकवार तिमीसँग यसरी असामाहिय भेट होस् फेरि जहाँ म तिमीलाई चिन्ने प्रयास नै नगरु, अहँ, चिन्दै नचिन्नु ठ्याक्कै विपक्ष दलको पार्टी जस्तै । तिमी त सबै बुझ्ने मान्छे, प्रेमको भाषा आफै बनाउने माननीय मान्छे, आधुनिक मान्छे ।
तिम्रै भाषामा पत्र संशोधन गरी तिम्रै ठेगानामा पठाउँदैछु । तिम्रो दुई तिहाई नपुग्दा संविधानमा नअट्ने धारा झै वदर गर्दैछु । पत्र पढेर पार्टी बिसर्जन गरी नयाँ दल गठन गछौं भने नि गर तर मेरो अदालतमा तिमीलाई न कहिल्यै सजाय, मिल्ने छ न न्याय !
न कुनै मत मिल्नेछ न कुनै आवाज ? तिम्रो राजनैतिक प्रेम तिम्लाई मुवारक छ ।